Ulwazi olukhokelwayo |
Ukuboniswa kweDijithali ye-2018 yeDijithali yeMandla kunye neMicrosoft yokubonisa iMakethi ye-LED engumboniso- ngaphakathi
Ngokwengxelo yamva nje evela kwi-LEDinside, icandelo lenkampani yophando ngeemarike iTrendForce, i-2018 yeDijithali yeDijithali yedijithali kunye neMicrosoft yeNtengiso yeMboniso ye-LED, ngenxa yokudodobala kwezoqoqosho, intengiso ye-LEDdisplay kwihlabathi liphela ifumene ukukhula okuncinci kunye neemfuno zentengiso ...
Yintoni uMgangatho oPhezulu oBonisa iiNdawo ze-LED?
Ayizizo zonke ii-LED zangaphandle ezenziweyo ezilinganayo. Ngokukhetha okuninzi kunye neempawu ezikhoyo, ukukhetha eyona ifanelekileyo kunokuba ngumceli mngeni. Umboniso othile we-LED uveza amanqanaba asemgangathweni ngelixa abanye begxila ekunikezeleni ngeyona ntengo iphakamileyo yokubonisa i-LED. Nguwuphi owufuna ...
Ukuboniswa kwangaphandle kwe-LED kugxile ngakumbi kulondolozo, olufumene umoya kunye nemvula. Ke kufuneka sikhethe umbandela ongcono, kwaye ngoku ngakumbi nangakumbi abavelisi bokubonisa i-LED ekhokelela kumgangatho ombi wesiboniso se-LED engeyiyo inkqubo efanelekileyo yokukhusela. Indlela / inyathelo Abathengi abaninzi abayicacelanga ...